नेपालगन्जमा अत्याधुनिक पेट्रोल पम्म
On: २०७७ फाल्गुन २५ गते, मंगलवार, ०६:४८ बजे प्रकाशित
नेपालगन्ज। नेपाल आयल निगमले बाँकेको नेपालगन्जस्थित रत्न राजमार्गमा ‘अटोमेसन’सहितको अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका आदर्श नगरस्थित निगमको ११ कठ्ठा जग्गामा अत्याधुनिक प्रविधिसहित नयाँ पम्प निर्माण गर्न लागिएको हो। पम्पको निर्माण भइरहेको निगमको नेपालगन्ज कार्यलयले जनाएको छ।
कार्यलयका प्रमुख कमला न्यौपानेले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पम्प निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए। करिब रु साढे तीन करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको पम्प नेपालकै नमूूना पम्पका रुपमा रहेको छ। निगमले आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा पहिलो पटक अटोमेशनसहित अत्याधुनिक पम्म निर्माण गर्न लागेको हो। पम्पमा दुई वटा डिजेल र ३ वटा पेट्रोलका ‘डिस्पेन्सिङ’ मेसिन राखिने छ। पम्पमा ओपनिङ स्कट, क्लोजिङ स्टक, बिक्री रेकर्ड, गुणस्तरको रेकर्ड कम्प्युटरबाटै हेर्न सकिने छ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: सुनकाे मूल्य बढ्यो, तोलाको कति?
पम्प सौर्य ऊर्जाबाट समेत सञ्चालन हुने निगमले जनाएको छ। पम्पभित्र एटिएम कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने, अग्नि प्रतिरोधात्मक एलमिनियम कम्पोजिट मेटेरियलबाट दुई वटा छानो निर्माण गरिने छ। सुरक्षाको लागि अग्नि नियन्त्रणको लागि चार वटा ७० केजी र १० वटा १० केजी क्षमताको ड्राई केमिकल पाउडरसहितको अग्नि नियन्त्रण यन्त्र राखिने छ । पम्पमा अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण गरिने छ।
‘केमिकल फोम’ सहितको अत्याधुनिक पेट्रोल पम्प निर्माणको काम आगामी जेठ अन्तिमभित्र सम्पन्न हुनेछ। पेट्रोल पम्पको हाताभित्रै सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कशप, कफीसप र अत्याधुनिक शौचालयसमेत निर्माण गरिने डिपोले जनाएको छ । पम्प सञ्चालन व्यवस्थापन निगमका आफ्नै कर्मचारीसमेत संलग्न हुने छन्। नेपालगन्ज डिपोमा ३२ लाख लिटर पेट्रोल र ७५ लाख लिटर डिजेलको भण्डारण क्षमता छ। निगमले रुपन्दे्रहीको भैरहवामा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पम्प निर्माण गरी गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा आएको छ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: प्रतितोला ११ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
योसँगै निगमको आफ्नै लगानीमा दुई वटा पम्प हुनेछ। निगमले अन्य ठाउँमा समेत आफ्नै पम्प सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। निगम आफैँले पम्प सञ्चालन गर्दा जुनुसुकै बेला पनि इन्धनको वितरणमा हुने हुँदा उपभोक्तालाई सहज हुन्छ। हाल निजीस्तरबाट मुलुकभर एक हजार ५०० सङ्ख्यामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्।
२०७७ फाल्गुन २५ गते, मंगलवार, ०६:४८ बजे प्रकाशित
प्रिमियर लिगमा लेस्टर पराजित
सेरमले बेलायत पठाउन लागेको ५० लाख डोज खोपमा भारतको रोकावट
चिनियाँ सिनोफार्मा खोपलाई डब्ल्यूएचओको अनुमति
आईपीएल खेल्न भारत पुगेका अष्ट्रेलियन खेलाडी माल्दिभ्समा
प्रधानमन्त्री ओली र नेपालपक्षका नेताबीच बालुवाटारमा संवाद, जुटेन सहमति
सभापति देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
नेपाल समुहका चार नेता बालुवाटारमा, महासचिव पोखरेल राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवासमा
विवेकको बन्ध्याकरणः कठै! युवाका विकल्प मनाङे?
सर्वोच्चले दियो पक्राउ परेका पत्रकार रिहा गर्न आदेश
एकै दिनमा ९,१९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेपालगञ्जमा कोरोनाबाट एकैघरका तीन दाजुभाइको मृत्यु
अक्सिजन नपाएर दुई कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख यादवले पदभार ग्रहण गरे
शवको चापले विग्रन थाल्यो विद्युतीय शवदाहको मेसिन
हाल ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खरिद गर्ने अवस्था छैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय
पत्रकारहरु आफ्नो पीडा किन लेख्दैनन्?: मन्त्री गुरुङ
आफुले चढ्ने गाडीे एम्बुलेन्स बनाउने सिडिओको घोषणा
टिकटक बनाउने क्रममा भीरबाट लडेर युवकको मृत्यु
५० लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
प्रधानमन्त्री ओलीले गराए कोरोना परीक्षण